Ukusonga i-Huawei kubizwa ngokuba yi-Mate X | I-Androidsis
Ukusonga i-Huawei kubizwa ngokuba yi-Mate X [iPosta]
Kwangoko kule veki, iSamsung yazisa ngefowuni yokuqala enokusongwa, i Galaxy Fold. Isixhobo esinomdla, nangona sinexabiso eliphezulu. Emva koku, IHuawei ukubhengeza isixhobo sayo esongekayo kwiintsuku ezimbalwa kwi-MWC 2019 kunye nefoto yepowusta ethathwe kumnyhadala iveze ukuba izakukhutshwa njenge Mate X.
Ewe Ifowuni kaHuawei enokusongelwa iya kwaziwa njengentengiso njengeMate X kwaye ungathandi iMate F, Mate Flexi okanye Mate Fold. U-Huawei wenze isicelo sophawu lwentengiso lwegama ngoFebruwari wonyaka ophelileyo. Nokuba, ngaxa lithile, uMlingani X wayecingelwa ukuba ligama lesixhobo esaye sakhutshwa njenge Mate 20 RS Idrafti yoyilo, kodwa ngoku yonke into icacile.
Ngokubhekisele kuyilo, Umlingani X unescreen esinye, ngokungafaniyo neGolden Fold. Inezona bezels zibhityileyo kwaye ayinayo inotshi, nangona ingabonakali ngathi ibanzi. Isikrini esiguqukayo sisongele ngasemva kwimowudi yefowuni.
Icala lasekunene lesakhelo sefowuni liyajiya nalo, elingothusiyo kuba kulapho kukho iikhamera kunye nolawulo. Kukho iskena somnwe esibekwe ecaleni esineqhosha phezulu kwaye ngasemva kukuseta kwekhamera kathathu.
IHuawei Mate X iya kuhambelana ne5G enkosi kwimodem I-Balong 5000 eyeyakhe inkampani, icandelo elenziwe lasemthethweni kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye liya kuxhotyiswa ngumqhubekekisi Kirin 980 7 nm. Akukho lizwi malunga nokuba lixabisa malini, kodwa asizukumangaliswa ukuba litshiphu kuneSamsung yeGold Samsung. Isixhobo sinokugqithisa ngokulula isithintelo se-euro esi-1,000 XNUMX. Ngendlela efanayo, sinethemba lokuba inkampani yaseTshayina izakubonisa ubumbano kunye neepokotho zabathengi kwaye ibonise esi siginali njengeyona nto inokumangalisa xa kuthelekiswa naleyo yenziwa ngumlingani wayo waseMzantsi Korea.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukusonga i-Huawei kubizwa ngokuba yi-Mate X [iPosta]
I-OPPO izisa ngokusesikweni i-10x zoom yayo
Icandelo elicociweyo leempawu zeHuawei P30 Lite